ခြောက်သွေ့တဲ့ရှင်သန်မှုအစားအစာအေးခဲ - အကောင်းဆုံး Freeze အခြောက်စားနပ်ရိက္ခာကြီးထွားလာ
a Comment ချန်ထား	/ Emergency food storage / အားဖြင့် အဒ်မင်
There may be times when you have to stay out foracertain while. Under these circumstance, အိမ်နဲ့ဝေးတဲ့ နေ့ရက်တွေမှာ မင်းနဲ့အတူ စားချင်နေလိမ့်မယ်။. ထုံးစံအတိုင်း, ချက်ပြုတ်ထားသော အစားအစာများကို သင်နှင့်အတူ ယူဆောင်သွားနိုင်မည် မဟုတ်ဘဲ ဤနေရာတွင် အစားအစာကို မှန်ကန်စွာ သိမ်းဆည်းရန် အရေးကြီးပါသည်။. တာရှည်ခံပြီး သိုလှောင်ရန် အရေးပေါ်ခွဲတမ်းအဖြစ် ဝယ်ယူထားသော အစားအစာများ.
ဤအစားအစာအမျိုးအစားများအတွက် ရွေးချယ်ခွင့်တစ်ခုမှာ အေးခဲခြောက်ဖြစ်သည်။. ဤအစားအစာအမျိုးအစားများသည် ၎င်းတို့ပါဝင်သော ရေကို ညင်သာစွာ ဖယ်ရှားရန် လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခု ဖြတ်သန်းသည်။. ရေဓာတ်ပါဝင်မှုကို နူးညံ့သိမ်မွေ့စွာ ဖယ်ရှားပေးခြင်းသည် အာဟာရနှင့် ဗီတာမင်အများစုကို နဂိုအတိုင်းရှိနေစေကြောင်း သေချာစေသည်။. ထားလိုက်ပါ။, ရေအနည်းငယ်ထည့်ရုံနဲ့ နှပ်ထားပေးပါ။ 10 မိနစ်အနည်းငယ်ကြာအောင် မွှေပေးပါ။.
ဤအစားအစာ အမျိုးအစားသည်လည်း အချိန်အတော်ကြာပြီး အချို့ကို သိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်။ 25 နှစ်များ သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုပါသည်။. ဆိုလိုသည်မှာ ၎င်းတို့၏ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်မတိုင်မီ ၎င်းတို့ကို မကြာခဏ အစားထိုးရန် မလိုအပ်ဘဲ ရေရှည်တွင် သင့်အား ငွေကုန်သက်သာစေသည်ဟု ဆိုလိုပါသည်။.
ကြီးပွားတိုးတက်သောဘဝ, ဥပမာ, အအေးခံထားသော အခြောက်ခံ အစားအစာများ သည် ကွဲပြားသည်။, အမဲသားစွပ်ပြုတ်နှင့် သစ်သီးများမှသည် ချိစ်ကိတ်ကဲ့သို့သော အရသာရှိသော အချိုပွဲများအထိ.
အေးခဲခြောက် – ဟင်းသီးဟင်းရွက်စိမ်းတွေ အပါအဝင်, ဟင်းချိုများနှင့်စွပ်ပြုတ်ရောနှော, အမျိုးအစားအမျိုးမျိုး၏နို့ထွက်ပစ္စည်းထုတ်ကုန် – are another well-known staple for keeping dry foods.
ဒီတော့, apparently, the ‘awkwardness’ of storing dry foods lies inamatter of timing preference: people who practice survival skills postpone gratification, အနာဂတ်တွင် သူတို့စားမည့် အစားအစာများတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံပါ။, နှောင့်ယှက်သူများသည် ငွေဖြုန်းတီးနေချိန်တွင်၊ – အများကြီးချေးတယ်။ – "စျေးပေါ" အစားအစာများ, အခုစားပြီး နောက်မှပြန်ပေးတယ်။. ဖြစ်နိုင်တယ် “အေးတယ်။”, ဒါပေမယ့် သေချာတာကတော့ စမတ်မကျပါဘူး။.
ကောက်ကျစ်သောသေခြင်းဆန္ဒမှတပါး၊, သိုလှောင်နိုင်သော အစားအစာ လုံလောက်စွာရရှိရန် မည်သူက အချိန်ယူရမည်နည်း။?
အခု မင်းရဲ့ အစားအသောက် သိုလှောင်ဖို့ ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲ။
ဤသည်မှာ သင်နှင့် သင့်မိသားစု အဝေးရောက်နေချိန်တွင် အစားအသောက်သိုလှောင်မှုအစီအစဉ်ကို ကူညီရန် အစီအစဉ်အနည်းငယ်ရှိပါသည်။.
တစ်ခုနှင့်စတင်ပါ။ 72 Hour Emergency Meal Kit နှင့်7သင့်အိမ်ရှိ မိသားစုဝင်တစ်ဦးစီအတွက် တောင်တန်းအိမ်၏ အေးခဲခြောက်စာအိတ်များ နေ့စား အစားအစာများ. အေးသောနေရာတွင် အမြဲရေပိုထည့်ထားပါ။, ဖြစ်နိုင်လျှင်.
သင်နှင့် သင့်မိသားစုအတွက် ရေတို အရေးပေါ် အစားအစာ သိုလှောင်မှု အစီအစဉ် ရှိပါသလား။3ရန်6သင့်အိမ်တွင်လများ. စတင်ခြင်းအမျိုးမျိုးကို သင်ရနိုင်သည်။, Thrive life Freeze-dried foods နှင့်အတူ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များနှင့် အချိုပွဲများ, ၎င်းသည် သက်တမ်းရင့်သည်။7ရန် 30 နှစ်ပေါင်း. Thrive life food သည် ရေနွေး သို့မဟုတ် ရေအေးဖြင့် ပြင်ဆင်ရလွယ်ကူပြီး စျေးကွက်တွင် အရသာအရှိဆုံး အေးခဲခြောက်အစားအစာဖြစ်သည်။.
Havealong term emergency storage program for you and your family for 1 ရန်2နှစ်ပေါင်း, but longer if you can afford it. Some people store3ရန်5years of freeze-dried food. Thrive life Freeze Dried Foods are excellent for this, as they haveashelf life of 25-30 နှစ်ပေါင်း. You can get them in pre-designed food storage packages, saving time and money! It is recommended that you keep these foods inacool place in your home, such asagarage, basement, or cellar, if available.
Have at least two 72 သင်၏ကားနှင့်ထရပ်ကားတစ်စီးတွင်အရေးပေါ်အခြေအနေဖြစ်သည့်အခါသင်၏ကားနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်ရေများများပါသောသင်၏ကျောပိုးအိတ်သို့မဟုတ်ထရပ်ကားတစ်စီးတွင်နာရီအရေးပေါ်အစာထည့်ရန်.
ဤစာရင်းရှိနိုင်ပါသည်5အရေးပေါ်ပြင်ဆင်မှုအတွက်သင့်ကိုပြင်ဆင်ရန်အပိုပစ္စည်းများနှင့်အကြိမ်ပေါင်းများစွာပိုများသည်, သို့သော်အရေးကြီးဆုံးပစ္စည်းများမှာအေးခဲနေသောအစာများဖြစ်သည် (Thrive life foods areagreat choice) နှင့်သန့်ရှင်းသောရေ.
အဘယ့်ကြောင့်ရှင်သန်ခြင်းဘ ၀ နှင့်အတူသွားပါ?
It is always essential to consider storing freeze-dried foods that havealong shelf life. ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင်၌, Thrive life Freeze Dried Food is by far the best and here’s why:
အေးခဲခြောက်လှန်းသည့် လုပ်ငန်းစဉ်သည် အေးခဲထားသော အခြောက်လှန်းထားသော အစားအစာများကို ဖန်တီးရာတွင် အသုံးပြုသည့် အစားအစာ၏ အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးကို ထိန်းသိမ်းပေးသည်။. အရေးအကြီးဆုံးကတော့, ၎င်းသည် အစားအစာထဲတွင် သဘာဝအင်ဇိုင်းများကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။, ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်အောင် စားပါ။. အစားအသောက်လည်း အရသာကောင်းဖို့ အာမခံပါတယ်။ 30 နှစ်ပေါင်း.
ရှင်သန်ခြင်း၏ အေးခဲခြောက်ထားသော အစားအစာများကို အိမ်လုပ်အစားအစာများကဲ့သို့ တူညီသောပါဝင်ပစ္စည်းများဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။, ဒါပေမယ့် ယူသာ 10 ပြင်ဆင်ရန်မိနစ်. အအေးခံထားသော အစားအစာများကို အခြေခံလုပ်ငန်းစဉ် သုံးခုဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။.
ပထမ, သူတို့သည်အရည်အသွေးရှိသောကုန်ကြမ်းများကိုဝယ်ယူကြသည်. ဒုတိယအချက်, သင်၏အစားအစာအေးခဲစေသောအခြောက်ခံစက်များသည်အားသာချက်များရှိသည်, ဒါကြောင့်သင့်ရဲ့အစားအစာအရသာစေသည်အဖြစ်, လတ်ဆတ်သောကြည့်ရှု။ စောင့်ရှောက်လော့, အလေးချိန်လျော့နည်း, နှင့်ပိုမိုအာဟာရကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန်. တတိယ, ၎င်း၏ချက်ပြုတ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်သည်အေးခဲနေသောအစာများကိုအိမ်တွင်ပြုလုပ်စေသည်, အေးခဲခြောက်သွေ့ခြင်းမပြုမီသူတို့၏ချက်ပြုတ်နည်းများကိုလတ်ဆတ်သောတစ်ခုတည်းသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သည်. အချို့ကမူအေးခဲနေသောအခြောက်ခံပစ္စည်းများကိုအထုပ်တစ်ခုထဲတွင်စုဆောင်းသည်.
ဘ ၀ အေးခဲနေသောခြောက်သွေ့သောအစားအစာများကိုကျန်းမာရေးနှင့်ခြောက်သွေ့သောနေရာများတွင်သိမ်းဆည်းထားသင့်သည်, ပြင်းထန်သော အပူချိန်နှင့် ကြာရှည်စွာ ထိတွေ့ခြင်းမရှိဘဲ ထုပ်ပိုးမှုကို ပျက်စီးစေမည့် ပတ်ဝန်းကျင်ကို ရှောင်ကြဉ်ပါ။, ထိုးဖောက်ခြင်းကဲ့သို့သော, dents သို့မဟုတ်ချေး.
Freeze Dried Foods သည် သင့်အိမ်နှင့်ဝေးရာသို့ ရှင်သန်နေထိုင်ပါ။.
၎င်းသည် အကောင်းဆုံး အစားအစာ သိုလှောင်သည့် ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်ပြီး ၎င်းသည် အရသာအတွက် ကြီးကြီးမားမား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီး အစားအစာများကို အကောင်းဆုံး အရည်အသွေးနှင့် ပြင်ဆင်ရန် လိုအပ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများအားလုံးကို ပံ့ပိုးပေးသောကြောင့်၊. ဤကုမ္ပဏီသည် gluten-free နှင့်သက်သတ်လွတ်အစားအစာများကိုနှစ်သက်သူများအတွက်အထင်ကြီးစရာကောင်းသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုရှိသည်။,ala carte ပါဝင်ပစ္စည်းများအတွက် စျေးနှုန်းချိုသာစွာ ထိန်းသိမ်းထားပါသည်။, ထို့ကြောင့် အချို့သော အစားအစာများ ဝယ်ယူခြင်းသည် ကောင်းမွန်သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ရှိမရှိ သိမြင်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။. သိုလှောင်မှုအတွက်. ရေရှည်အစားအစာ.
စားနပ်ရိက္ခာသိုလှောင်ရုံ augason လယ်ယာများ
Augason Farms သည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ပါဝင်ပစ္စည်းများကို ကောင်းမွန်စွာ ရောစပ်ပေးပါသည်။, ဟင်းချိုတွေလိုမျိုး, အအေးခံထားသော အသီးအနှံများ, ပဲ, ရောနှောသောက်ပါ။, ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ. သောက်သုံးရေနှင့် ရေစစ်ထုတ်စက်များသည် သင့်ရွေးချယ်မှုတွင် ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။. ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်သည့်အစားအစာကောင်းတစ်ခုရှိခြင်းသည်ကောင်း၏, သို့သော်သန့်ရှင်းသောသို့မဟုတ်ရေပူမရှိဘဲအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်များစွာအသုံးဝင်ပါသည်. အရေးပေါ်လိုအပ်ချက်များသည်သင်၏အစားအစာရွေးချယ်မှုနှင့်အတူရေပေးဝေမှုဖြေရှင်းနည်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်.
အကယ်၍ သင်သည်ထိုအစားအစာကိုအချိန်တိုတိုအတွင်းစခန်းချရန်သို့မဟုတ်လိုအပ်သည်ဆိုပါက, ဒီစတိုးဆိုင်မှာကြိုတင်ထုပ်ပိုးထားသောအစားအစာများကိုရွေးချယ်ဖို့အကောင်းဆုံး – သငျသညျထင်မဟုတ်လျှင်သင်ဘာမျှမအတွက်အမှုန့်ဒိန်ခဲရောနှော၏ 52 အောင်စလုပ်နိုင်တဲ့နိုင်ပါတယ်. အချိန်. သင်နှစ်အနည်းငယ်ကြာရန်အစားအစာအလုံအလောက်ရှိသောပိုကြီးသောအစားအစာသိုလှောင်သည့်ကွန်တိန်နာများကိုသင်ဝယ်ယူနိုင်သည်, ဒါပေမယ့်ရေတိုအခြေအနေတွေအတွက်ရွေးချယ်စရာတွေလည်းရှိပါတယ်.
ဤ ၀ န်ဆောင်မှုသည်အထူးသဖြင့်ဟင်းချိုကဲ့သို့သောအခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုပေါင်းစပ်ပေးသည်, အအေးခံထားသော အသီးအနှံများ, ပဲ, အရောအနှောများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များသောက်ပါ. သောက်သုံးရေနှင့် ရေစစ်ထုတ်စက်များသည် သင့်ရွေးချယ်မှုတွင် ပျောက်ဆုံးနေပါသည်။. ရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်သည့်အစားအစာကောင်းတစ်ခုရှိခြင်းသည်ကောင်း၏, သို့သော်သန့်ရှင်းသောသို့မဟုတ်ရေပူမရှိဘဲအရေးပေါ်အခြေအနေတွင်များစွာအသုံးဝင်ပါသည်.
အရေးပေါ်သို့မဟုတ်ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးပစ္စည်းများတွင်အစားအစာပါ ၀ င်ရမည်. အခြားမည်သည့်အစားအစာမျှမ, သို့သော်သင်ယေဘူယျအားဖြင့်သင်နေထိုင်သောအခြေအနေများအတွက်အဆင်ပြေသောအေးခဲသောခြောက်သွေ့သောရှင်သန်မှုအစားအစာများ. အရေးပေါ်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသည့်အစားအစာများထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းတွင်အထူးပြုကုမ္ပဏီများအနက်မှတစ်ခုမှာ Wise Foods ဖြစ်သည်, Inc.
လူအတော်များများက Wise Foods သည် အကောင်းဆုံးရှင်သန်မှုကို ပေးသည်ဟု ဆိုကြသည်။, အရေးပေါ်, ပြီးတော့ စျေးမှာ စခန်းချ စားသောက်တယ်။, အကြောင်းပြချက်ကောင်း. အခြားအစားအစာများနှင့် မတူဘဲ အမျိုးအစားတူသည်။, အခြောက်ခံထားသော အစားအစာများသည် စျေးအသက်သာဆုံးဖြစ်သည်။. ဖြည့်စွက်ကာ, ၎င်းကို ကျစ်လစ်သိပ်သည်းစွာ စားသုံးနိုင်သောအိတ်များဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည်။, ဒါကြောင့် အရမ်းပေါ့ပါးပြီး သယ်ဆောင်ရလွယ်ကူပါတယ်။, အရသာအလွန်ကောင်းသည်။, မျိုးကွဲများစွာဖြင့် လာပါသည်။.
ရှင်သန်နိုင်သော အစားအစာများသည် အချိန်ကြာကြာ သိမ်းဆည်းထားနိုင်စေရန် အလွယ်တကူ မပျက်စီးသင့်ပါ။. Wise Foods မှာ ရှိတယ်။ 25 တစ်နှစ်တာ သက်တမ်း!
Wise Foods ထုတ်ကုန်များသည် ပြန်လည်ထုပ်ပိုးနိုင်သော ထုပ်ပိုးမှု သို့မဟုတ် အိတ်များဖြင့်လည်း ပါရှိသည်။, ပြီးရင် အကြီးကြီး သိမ်းထားတယ်။, ခိုင်ခံ့သော ပလပ်စတစ်ပုံးများ. ဒီပုံးတွေက သယ်ရတာ အံ့သြစရာကောင်းတယ်။, ကလေးအတွက်ပင်, သို့မှသာ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် သင်နှင့် သင့်ကလေးသည် ရိက္ခာကို တစ်လ သို့မဟုတ် နှစ်လကြာ သယ်ဆောင်သွားနိုင်မည်ဖြစ်သည်။.
ပုံးများသည် အခြားအရာများအတွက်လည်း အဆင်ပြေလာပါလိမ့်မည်။, တူးပြီး အမှိုက်ပစ်သလိုမျိုး. ပေါင်းတယ်။, ကွန်တိန်နာတစ်ခုစီ၏အောက်ခြေကို ပုံသဏ္ဌာန်ပြု၍ ပေါင်းစည်းသောအခါတွင် သော့ခတ်ထားသည်။, ဒါကြောင့် သူတို့က မင်းရဲ့မြေအောက်ခန်းမှာ နေရာအများကြီးမယူဘူး။, ဂိုဒေါင်, သို့မဟုတ် နေရာတိုင်းတွင် နေရာချထားရန် စီစဉ်ထားသည်။. သူတို့ပေးသော ရှင်သန်မှု အစားအစာ.
Wise Foods ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူသည့်အခါ, မနက်စာကြားမှာ သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်။, နေ့လည်စာနှင့် ညစာ ရွေးချယ်မှုများ, ထို့အပြင် အရသာရှိသော အအေးခံထားသော အသီးအရွက်များကို ရွေးချယ်နိုင်သည်။, သစ်သီးများနှင့် အသားများ.
အရသာရှိသော နံနက်စာရွေးချယ်မှုအချို့တွင် ကြွပ်ရွသော granola ပါဝင်သည်။, သီးနှံ, နှင့် ပန်းသီးသစ်ကြံပိုးခေါက်. ညစာနှင့် နေ့လယ်စာအတွက် သင့်ရွေးချယ်မှုတွင် Alfredo ခေါက်ဆွဲကဲ့သို့ အရသာရှိပြီး အရသာရှိသော အရသာများ ပါဝင်ပါသည်။, ငရုတ်သီး သို့မဟုတ် macaroni နှင့် ဒိန်ခဲ, ရိုတီနီ, tortillas သို့မဟုတ် ခရမ်းချဉ်သီးပင်စိမ်းဟင်းချို, ဆန်နှင့်အတူ stroganoff နှင့် teriyaki. သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ပြင်ဆင်ရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။. Some of your food only requires boiling water and after 12-15 minutes your food will be ready.
The nutritional value and flavor of Wise Foods products is sure to beagreat substitute for homemade meals. ပေါင်းတယ်။, if you stock up on these types of foods, အနာဂတ်မှာ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းတွေအတွက်လည်း သင်ပြင်ဆင်ထားမှာပါ။.
အရေးပေါ်အစားအစာကို ထိန်းသိမ်းခြင်းသည် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှင့် ငွေရေးကြေးရေးအခက်အခဲများကြားတွင် သင့်မိသားစုကို အမြဲကောင်းမွန်စွာ ကျွေးမွေးနိုင်စေရန် သေချာစေမည်ဖြစ်သည်။.
တောင်ပေါ်အိမ်တွင် အခြောက်လှန်းထားသော အစားအစာများကို အေးခဲထားပါ။
တောင်အိမ်အစားအစာများ, သတ်မှတ်ထားသော အချိန်ကာလတစ်ခုအတွက် အအေးခံထားသော အစားအစာများကို ပေးဆောင်ပါ။, အရေးပေါ် အစားအစာအားလုံးတွင် ပရိုတင်းဓာတ် ပေါင်းစပ်ပါဝင်သင့်သည်။, ကစီဓာတ်, အဆီ. အကယ်၍ သင်သည် သင့်ကိုယ်ပိုင် အရေးပေါ် အစားအစာ သိုလှောင်မှုကို စတိုးဆိုင်အတွင်း ပစ္စည်းများဖြင့် ထုပ်ပိုးထားမည်ဆိုပါက, သန့်စင်ထားသော အသားများနှင့် စည်သွပ်ဘူးများ ရွေးချယ်ထားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။, အသီးအနှံနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ, ကွတ်ကီးများ, အစေ့အဆန်များ, ရေ. သေတ္တာအဖွင့်နှင့် အပူရင်းမြစ်ရှိရမည်။, မီးဖို သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်မီးဖိုကဲ့သို့သော.
ဤ Mountain House Meal Kit တွင် မနက်စာ သုံးကြိမ် ပါဝင်သည်။, ဟင်းသီးဟင်းရွက်သုံးခြမ်း, နှင့် နေ့လည်စာ သို့မဟုတ် ညစာ အမြည်းစားစရာ ၁၀ အောင်စ ခြောက်ထုပ်, အရွယ်ရောက်ပြီးသူ တစ်ဦးအတွက် သုံးရက်စာ လုံလောက်ပါသည်။. ဘလူးဘယ်ရီနှင့် နို့ Granola, ဘေကွန် ကြက်ဥမွှေပါ။, ဝက်ပေါင်ခြောက်နှင့် ငရုတ်ကောင်း မွှေထားသော ကြက်ဥ, ပဲတီစိမ်းဥယျာဉ်, Whole Grain ပြောင်း, ပဲစိမ်းများကို လှီးဖြတ်ပါ။, အမဲသား Stroganoff, ကြက်သား Teriyaki, အမဲသားနှင့် ငရုတ်သီး mac, ထမင်းနှင့်ကြက်သား, နွေဦးခေါက်ဆွဲ, ထမင်းချိုချဉ်နဲ့ ဝက်သား. ဤအရေးပေါ် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သော အစားအစာများအားလုံးကို ရေထည့်ခြင်းဖြင့် ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင် အလွယ်တကူ ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး သက်တမ်း ခုနစ်နှစ်ရှိသည်။. Santa Barbara မှ ဖောက်သည် Christopher Coakley ကို ကျေနပ်သည်။, ကယ်လီဖိုးနီးယား. ဟုဆိုသည်။, “Mountain House ၏ အစားအစာများသည် ယေဘုယျအားဖြင့် အအေးခံထားသော အစားစာအများစုထက် ပိုအရသာရှိသည်။.
သင့်ကိုယ်ပိုင် အစားအစာသိုလှောင်မှု တည်ဆောက်ခြင်းသည် နှစ်ပတ်ကြာ အမှီအခိုကင်းစွာနေရန် လိုအပ်သည့် အခြေအနေများအတွက် စံပြဖြစ်သည်။. သင်ကြောင်း၏အကျိုးဆက်များကိုမျှော်လင့်ပါ, အရေးပေါ်အစားအစာသိုလှောင်ရေးကိရိယာကိုစဉ်းစားပါ. ၎င်းတို့တွင်သင်နှင့်သင်၏မိသားစုကိုတစ်လမှတစ်နှစ်ကျော်အထိကူညီနိုင်သည့်အေးခဲ။ အခြောက်ခံထားသောအစားအစာများအိတ်များပါရှိသည်. MRE အဖြစ်သတ်မှတ်သည်, ဤပစ္စည်းကိရိယာများတွင်အတူတကွပြင်ဆင်နိုင်သောအစားအစာများနှင့်တစ် ဦး ချင်းပစ္စည်းများကိုပေါင်းစပ်ထားသည်.
တောင်အိမ်အစားအစာများ 10 အိတ်များနှင့်ဘူးများ, အပြည့်အဝ hydrate ဖို့သာရေအေးလိုအပ်ပါတယ်. သင်၏အရေးပေါ်အစာသိုလှောင်ရုံကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သည့်အခါ, တစ်ခုချင်းစီကိုသတိရပါ 10 သတျတော – တစ်ဂါလံအရွယ်အစားအကြောင်းကို – သာတစ်လကြာသင့်တယ်. ဤသေတ္တာများတွင် မည်သည့်အစားအစာကိုမျှ အအေးခန်းမထားသင့်ပါ။. ထို့ အပြင်, အစုံလိုက်တွင် သတ်မှတ်ထားသော သောက်သုံးမှု အကြံပြုချက်များကို လိုက်နာပါက သင်စားသုံးမည့် ကယ်လိုရီပမာဏကို အများအားဖြင့် ပါရှိသည်။.
Being prepared with enough mountain house freeze dried foods will help you and your family through tough times. ထို့အတူ, အရေးပေါ် အစားအသောက် အစုံအလင်ကို ဗီတာမင်နှင့် သတ္တုဓာတ် ဖြည့်စွက်စာများဖြင့် ဖြည့်စွက်သင့်သည်။, ဘေးအန္တရာယ်နှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကာလတွင် သစ်သီးနှင့် ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ အလွန်အကျွံ မစားသုံးနိုင်သောကြောင့် ဖြစ်သည်။.
Once have an emergency food storage program, သင်နှင့် သင့်မိသားစု နေ့စဉ်အသုံးပြုနေသည့်အရာများကို လွယ်ကူသောစာရင်းပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် စတင်ပါ။ – အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် သင်လိုအပ်နိုင်သောအရာများ; အကြိုက်ဆုံးအစားအစာများကဲ့သို့သော & အချိုရည်များ, ဗီတာမင် & ဆေးဝါးများ, အနွေးထည် & ဘွတ်ဖိနပ်, စောင်, ဘက်ထရီ, ဖယောင်းတိုင်များ, အပိုငွေ, အစားအစာ သို့မဟုတ် ရေကို အပူပေးရန် အခြားနည်းလမ်း, လက်သုံးရေဒီယို & ဓာတ်မီး, စသည်တို့. ဒီတော့, မည်သည့် အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်မဆို သင့်ကိုယ်သင် ပြင်ဆင်ပါ။, ပြီးတော့ အဲဒါကို လုပ်ရတာ ပျော်ပါ တယ်။. ရှင်သန်ခြင်းနှင့်အတူ, မင်းလုပ်ခဲ့တာ အရမ်းပျော်လိမ့်မယ်။.